Finfinneen barattoota mana barumsaa mootummaa kuma 600'f 'yuunifoormii' bituufi - BBC News Afaan Oromoo
Bara barnootaa dhufu irraa eegalee manneen barnoota mootummaa magaalaa Finfinnee keessa jiran 400 keessatti barattoota baratan 600,000 ta'aniif uffata dambii, barruulee fi qalama, akkasumas wantoota barnootaf barbaachisan bituufi jedhe bulchiinsi magaalattii.
"Sirna barnootaa deeggaruufi qulqullina barnootaa fooyyessuuf jecha kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee Taakkalaa Uumaa kan eegalsiisanidha," jedhu dubbi himtuun bulchiinsa magaalattii Aadde Feevan Tashooma.
Itoophiyaa keessatti irra caalaan manneen barnootaa mootummaa keessatti kan ijoollee barsiifatan maatii harka qalleeyyiidha.
Mootummaan maatii kanneen deeggaruuf karoorfate sagantaa kana eegaluu himan Aadde Feevan.
Manneen barnootaa magaalattii keessa jiran baasii guutuu mootummaan baasuun uffata dambii ykn yuunifoormii gosa afur kan qabaatan yoo ta'u, oolmaa daaimmanii, kutaa 1-4, 5-8 fi sadarkaa lammataa jechuun bakka afuritti qoodameera.
Mannen barnoota wayita ammaa magaalaa Finfinnee keessa jiran kan dhunfaas ta'e kan mootummaa yuunifoormii gosa adda addaa kan mataa ofii uffatu.
Karoorri kun haga ta'e kan wal fakkeessuuf akka gargaarus Aadde Feevan himaniiru.
Uffata dambii kana barattoonni jaalatanii kan uffatan akka ta'u Waldaa Dizaayinaroota Itoophiyaa waliin hojjetamaa jira jedhan.
Ogeeyyii barnootaa fi xiin-samuu waliinis mariin taasifamuu fi muuxannoon magaalota biyyoota biroo xiyyeeffannaa keessa galfamuus himaniiru.
Barattoota kuma 600 magaalattii keessa jiraniif uffata dambii tolchuuf, gatiin uffata tokko adda baafame dizaayinarootaan kan dhiyaatu ta'us walumaa galatti hanga birrii miliyoona 300 baasisu danda'a tilmaamni jedhu jira jedhan.
Uffata ganna tokkoo oliif tajajilu danda'u, kan barattoonni jaalatanii uffataniifi hunda waliigalchiisuu danda'utu tolfama jedhu.
Goodayyaa suuraa Barattoonni bulchiinsa magaalattii, dizaayinarootaa fi ogeeyyii xiin-sammuu waliin mari'ataniiru.
Biiroon barnootaa maatii barattootaa waliin mari gochuu kan himan Aadde Feevan, diizaayiniin isaa akkuma xumurameen gara omishuutti akka galamuufi ji'a tokko keessatti xumuramee barattootaaf akka raabsamu himaniiru.
"Warshaaleen guyyaatti uffata kuma dhibbaan lakkaa'amu omishuu danda'an gurguddoon waan jiraniif rakkisaa hin ta'u" jedhu.
Bulchiinsi magaalatti kaka'uumsa Kantiibaa Itti Aanaa Taakkalaa Uumaatiin waajjira tola-ooltota qindeessu dhaabuufi fuulduraaf dhaabbilee fi namoonni dhunfaa gocha kana akka deeggaran taasifama jedhaniiru.
Barattoonni yuunifoormiin alatti barruulee fi qalama ni argatu.
Walumaa galatti barruuleen miliyoona torba kan barbaachisu yoo ta'u hojii tola ooltummaa torban tokkoo qofaan barruleen miliyoona 3.5 walitti qabamaniiru jedhan. Kan hafe torbee itti aanu walitti qabuun barattootaan gahuuf hojiin hojjetamaa jira jedhan.
Hojiin mannen barnootaa mootummaa magaalattii keessa jiran haaromsuus eegalamee jira.
Manni barumsaa Yakkaatiit 12 jedhamu haaromsi taasifameefi mana barumsaa bultii barattoota shamarranii yoo taasifamu, manni barumsaa Itiyoo-Jappaan jedhamu naannoo Aqaaqiitti argamu mana barumsaa bultii barattoota dhiira ta'a jedhameera.
Manneen barumsaa lamaanuu barattoota qabxii olaanaa galmeessisan 500 mata mataatti simatanii barsiisu.